सीके राउतदेखि उपेन्द्र, राजेन्द्र पसेपछि हामी आन्दोलनमा गएनौं : वैजनाथ चौधरी – Tharuwan.com
एमाले नेता तथा सभासद् बैजनाथ चौधरीले थारु आन्दोलनमा मोहन वैद्यदेखि सीके राउतसम्मको संलग्नता रहेकाले आफूहरु सहभागी नभएको बताएका छन्। थारु आन्दोलनमा एमालेका सभासद्हरु सहभागी छैनन्। चौधरीका अनुसार, यो आन्दोलनमा सिके राउत, वैद्य र विप्लब र राजेन्द्र महतो सबैको गठबन्धन भएकाले एमालेका थारु बाहिर बसेका हुन्। त्यसो भए थारुको माग सम्बोधन गर्ने माध्यमार्गी बाटो के हो त? चौधरी भन्छन्- ‘दाङदेखि कन्चनपूरसम्मको भूभागलाई एकै प्रदेशमा राखेर समाधान खोज्न सकिन्छ।’
उनले टीकापुरको घटनालाई सुनियोजित भनेका छन्। अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने- स्थानीय प्रशासनसँग थरुहट र अखण्ड दुवै आन्दोलनकारी बसेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने, कुनै हालतको हिंसा नगर्ने सहमति भएको थियो त्यही विहान। त्यसको लगत्तै जुन खालको मान्छे उपस्थित गराइयो र धोखापूर्ण ढंगले सुरक्षाकर्मीको हत्या भयो, यो निकै गम्भीर विषय हो। यसको छानबिन गर्न सरकारले समिति बनाइसकेकाले त्यसको रिपोर्ट आउला नै, अहिले म यति चाहिँ दावीका साथ भन्छु कि, यो घटना वा आन्दोलन थारुका माग पूरा गराउने ढंगले भन्दा पनि अहिलेसम्म पाइएका उपलव्धी पनि गुम्ने ढंगले भएको छ।‘
उनले यसको जिम्मेवारी पनि थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले लिनुपर्ने बताए। ‘जिम्मेवारीबाट पन्छिनु गैरजिम्मेवारपूर्ण कुरा हो। आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरुले जिम्मेवारी लिनैपर्छ। यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएर कसैले छुट पाउँदैन।
उनले भने- नेकपा एमालेमा रहेका थारु सभासद र थारु नेता कार्यकर्ताहरु यो आन्दोलनमा छैनौं। थारुको माग पूरा हुनुपर्छ, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सहितको अधिकार संविधानमा स्पष्ट लेखिनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौं। तर, यो आन्दोलनमा जुन गठबन्धन बनेको छ, यसप्रति हामी सशंकित भयौं। यसमा मोहन वैद्यदेखि सिके राउतसम्मको संलग्नता छ। उपेन्द्र यादव राजेन्द्र महतोदेखि विप्लबसम्मको सहभागिता रहेपछि हामी यसमा नबसेका हौं।’
उनले दाङदेखि कन्चनपूरसम्मको भूभागलाई एकै प्रदेशमा राख्नुपर्ने बताए। त्यसो भयो भने थारु आन्दोलनका अधिकांश माग पूरा हुने उनको दाबी छ। ‘त्यसो भए उनीहरूको भाषा, भेष, संस्कृति मिल्छ। उनीहरुबीच बेटी रोटीको सम्बन्ध छ,’ उनले भने।
11 thoughts on “सीके राउतदेखि उपेन्द्र, राजेन्द्र पसेपछि हामी आन्दोलनमा गएनौं : वैजनाथ चौधरी”
थारु को नाउमा कलङ्क हौ तिमि जस्ता नेताहरु ………..
Gulam bhayera ajhai pugena yesta tharu neta haru lai ani kasari sunischit hune ho tharu haru ko adhikar.. Dhikkar xa timi lai baijnath…ab khasiya haru ko taluwa chatnu.
थारुको आन्दोलनमा सिके राउत पस्यो । बिप्लव माओवादी पनि पस्यो । भारतीय पनि पस्यो । हामीलाई सहयोग गर्न आए । राम्रै भयो । उनीहरुलाई त हामीले स्वागत गर्नु पर्छ । धन्यवाद दिनु पर्छ । जसले सहयोग गर्दैछ उसैलाई गालि गर्ने ? तिमि खास मा भिमे राउलको भैसी गोठाला हौ । अझ तिमीले एउटा अन्तरवार्तामा थारुहरुको भाषा सस्कृति एउटै छैन भनेर भनेका छौ । हो हाम्रो भाषा अलि कति फरक फरक छ तर हामि बुझ्छौ र सामान्य रुपमा झापा देखि कन्चनपुर् सम्मका थारु सस्कृति एउटै हुन् र छन् । तिमीले आफ्नो बहिनिले नवलपुरमा आफ्नो सासु संग नेपालिमा कुरा गर्ने भनेका छौ । तिम्रो बहिनिको सासु पनि त तिम्रै गाउ तिरको हो । अनि आफनै छिमेकी गाउका थारु संग पनि किन नेपालि बोल्नु पर्यो ? यसको मतलव के हो भने तिमीहरुले थारु सस्कृति र संस्कार बिस्तारै छोडदैछौ । थर मात्रका चौधरी हौ तिमि ।
Ta jasta tharu aaguwa kai karan tharu haru sampann huda hudai matra sewak bhaye base ka chan.Afno malik afai baanyo bane ta jasta ulo haru ko kursi khosincha bhanne darr cha timi haru lai…
यो बाहुनको पुछार गद्दार बैजनाथ जुताको माला लगाउने योग्यको छ l
Chaudhary L says:
KP oli ko gulaam po rahexa ,,,,,aba kei dinma usko jutta ma brush garnu hola baidyanath jee…ani ur chhora chhori haru lai kamaiya ra kamlari banaula tespaxi afno hak magnu hola ….yesta harulae chunaabma bhott dine haru nai murkha xannn jasto lagna thalyoooo….I REQUEST PERSONALLY EVERYONE (THARU) TO REJECT THESE INSECTS AND PLEASE NEVER GIVE VOTE TO HIM…IF U HAVE BRAIN
केपी, बामेले आउन दिएनन् भन्न सकेन । आरोप लगाउँछ मोहन बैद्यदेखि सिके राउत सम्म । थारुको नाममा कलंक हो, गद्दार, फटहा हो ।
साथीहरु ; धेरै के लेखू ? थारुको मुद्दा जायज हो भनेर सबैले स्विकारी सकेको अवस्था छ I नेता,सेना,प्रहरी समेतले पनि राजनैतिक मुद्दा हो, राजनैतिक तबरले हल गर्नुस भनिकेकोछ ; र सेनाले हामी परिचालन भएको छैन भनिसकेकोछ ! बार्तामा बोलाई सकेको अबस्ता छ; वार्ताका केहि सामान्य नियम र सर्त मान्ने बितिकै वार्ता सुरु हुन्छ !
थारु आन्दोलनको क्रमma राष्ट्र सेवक प्रहरी मारिनु दुर्घटना थियो ; अहिलेसम्म थारुले मारे भन्ने कतै कहिँबाट प्रमाणित नभएको अवस्थामा त्यहाका अखण्डबादी बाहेक सबैले थारुको माग जायज हो भनेर स्विकारी बार्ता समेत बोलाई सकेको अवस्था … सबैले सबैको अस्तित्व स्विकार्नु नै समस्याको समाधान हो जस्तो लाग्छ मलाई ! नभए ५२ साल नदोहारियेला भन्न सकिन्न ! के हामी त्यो अवस्था चाहान्छौ त् ?!
यो मुर्खले कसरी भन्न सकेको थारुले जिम्मा लिनु पर्छ भनेर ?! यो साला सरकारी गुप्तचर /भिजलानते रहेछ ! सेना र सरकार समेतले थारुले हुदैहैन भनेको बेला यो ब्लेम लगाउने को हो ?!
माननीय ज्यू थरुहट थारुवान आन्दोलनमा सिके राउत, गुप्ता, यादव रहेको बकमपुसे वाइहात कुरा गरेर नेपाली जनताहरुलाई भ्रमित गर्ने काम नगर्नुस । नेपाली जनताहरुले सबे बुझिसकेका छन्, जानी सकेका छन् तपाईहरुहको भूमिका के कस्तो छ ? के के गर्नु भयो विगतमा सबै इतिहासले पुष्टी गर्ने छ । आन्दोलनलाई भाँडने काम नगर्नुस, लगाम लगाएको संविधानसाका घोडा तपाईँहरु के गर्न सक्नु हुन्छ र लगाम त के.पी. ओलीको हातमा छ अनी कसरी आउनु हुन्छ थरुहट आन्दोलननमा ? अखण्डको पृष्ठपोष गर्दै थरुहटमाथि दमन गर्ने प्रहरी प्रशानको वकालत गर्ने तपाई एकचोटी फर्केर इतिहास हेर्नुस झापा बिद्रोहमा के भएकको थियो ? तपाईको खडग ओलीले हतियार उठाएको बिर्सिनु भयो ? अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक आन्दोलनमा उत्रेका थारु समुदायलाई घटनाको जिम्मा लिने भन्नु हुन्छ ? धेरै ठूलो कुरा गर्नु पर्दैन तपाईकोे घर आँगन डण्डा गोली काण्डका अपरराधीहरु कहाँ पुगे ? तपाईको सरकार छ संस्कृति मन्त्री तपाईकै पार्टीको कृपाशुर शेर्पा छन् खै डण्डाको थारु संग्राहलयको क्षतिपूर्ति तथा पुन निर्माण गराउन सकेको ? थारु समुदायको लागि एउटा सिन्को भाँच्न नसक्ने तर थारु आन्दोलनमा घुसपैठ भन्ने ? लाज लाग्दैन तपाईहरुलाई यस्तो झुठो र फट्याई कुरा गर्न ? प्रमाणि गरेर देखाउन हामी चुनौती दिन चाहन्छौं ।
ae ma le tharu heet ma chaina ae tharu.
ae ma le tharu haru ko birodi hun. thaiya bahun baad chan
ra rana vanda pani charko sasan cha eni haru ko. plz leave this party.